नेप्से र कारोबार रकममा सामान्य सुधार - Naya Patrika
नेप्से र कारोबार रकममा सामान्य सुधार
काठमाडौँ, १८ माघ | माघ १८, २०७४
बुधबार नेप्से परिसूचक तथा कारोबार रकम दुवैमा सामान्य सुधार देखिएको छ । बजार खुलेको केही समयपछि ओरालो लागेको नेप्सेले यस दिन १ हजार ४ सयको मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा टेवा पाएको थियो । त्यसपछिको समयमा सुस्त गतिमा उकालो लागेको नेप्से अन्तिम समयसम्ममा २ दशमलव २६ अंक बढेर १ हजार ४ सय ४ दशमलव ४९ बिन्दुमा पुगेको छ ।
लगानीकर्ताहरूले नेप्सेलाई १ हजार ४ सय बिन्दुभन्दा तल झर्न नदिने प्रयासमा रहेको एक ब्रोकरले बताए । त्यसैले सो बिन्दुलाई मनोवैज्ञानिक बिन्दु पनि भनिएको हो । साथै, दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणहरूले लगानीकर्तालाई केही भए पनि मनोबल दिइरहेको छ । केही सन्तोषजनक वित्तीय विवरणका कारण लगानीकर्ताहरू आशावादी देखिएका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिनको कारोबार रकम बढेको छ ।
यस दिन १ सय ५६ कम्पनीको ३ हजार ८ सय ९४ पटकको कारोबारमा रू. ३१ करोड १५ लाख ३४ हजार २ सय ७५ बराबरको ७ लाख ४९ हजार ४ सय ८४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ३५ अंक बढेर २ सय ९६ दशमलव ६२ बिन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ३८ दशमलव ६७ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. २ अर्ब ६४ करोड बढेर रू. १६ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ ।
माघ १५ गतेदेखि एफपिओ निष्कासन खुला गरेको बुटवल पावर कम्पनीको सेयर यस दिन सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको छ । यस दिन सो कम्पनीको रू. २ करोड ४२ लाखबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यसैगरी, सानिमा माई हाइड्रोपावर र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको यस दिन रू. २ करोड २० लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य यस दिन ७ दशमलव ९२ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५६ कम्पनीमध्ये यस दिन ८३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ४७ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बाँकी २६ कम्पनीको सेयर मूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
यस दिन जलविद्युत्, उत्पादनमूलक र ‘अन्य’ समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक बढेको छ । ट्रेडिङ समूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत बढेको छ ।
त्यसैगरी, होटेल समूहको परिसूचक १ दशमलव ७१ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत र बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव १६ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव १४ प्रतिशत घटेको छ ।
नबिलले खारेज गर्‍यो सिइओ नियुक्ति गरेको निर्णय
नबिल बैंक लिमिटेडले बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा अनिल केशरी शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गरेको छ । बैंकको माघ १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको हो भने गत पुस १३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले शाहलाई सिइओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ सिइओको खोजीमा सेन्चुरी
सेन्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले नयाँ सिइओ नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताएको छ । बैंकको कात्तिक १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अनिल केशरी शाहलाई सिइओ पदमा १ जनवरी, २०१८ देखि हाजिर हुने गरी नियुक्त गरेको थियो । तर, शाहले हाजिर हुन असमर्थ रहेको भनी पत्र पठाएपछि बैंकको माघ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो सम्झौता रद्द गरेको हो ।
नेसनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा बढ्यो
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा नेसनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले रू. ३ करोड ९१ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब चार प्रतिशत बढी हो । कम्पनीको ब्याज खर्च र कर्मचारी बढेपछि खुद नाफा प्रभावित भएको हो ।
सो अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी रू. १२ करोड र जगेडा कोष रू. १२ करोड ४७ लाख रहेको छ । कम्पनीले सो अवधिमा रू. ४९ करोड ७१ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ भने रू. १ अर्ब ८२ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीको ब्याज आम्दानी बढेर रू. ७ करोड ९३ लाख पुगेको छ ।
कम्पनीले रू. १६ करोड ब्याज आम्दानी गरे पनि ब्याज खर्च ८ करोड पुगेपछि खुद ब्याज आम्दानी सामान्य मात्र बढ्न पुगेको हो । कम्पनीको सञ्चालन मुनाफा अघिल्लो आवको तुलनामा बढेर रू. ६ करोड १५ लाख पुगेको छ । कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) रू. ६५ दशमलव ३३, प्रतिसेयर नेटवर्थ रू. २ सय ४, मूल्य आम्दानी अनुपात ४२ दशमलव शून्य ६ गुणा र तरलता अनुपात २४ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।
ल नेसनल हाइड्रो रू. ९७ लाख घाटामा
नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ९७ लाख २१ हजार खुद घाटा व्यहोरेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनी रू. ९५ लाख २९ हजार नाफामा रहेको थियो ।
कम्पनीको चुक्ता पुँजी रू. १ अर्ब ३८ करोड रहेको छ भने जगेडा कोष रू. ४३ करोड ७ लाख ऋणात्मक रहेको छ । सो अवधिमा कम्पनीको विद्युत् बिक्रीबाट रू. ५ करोड ३९ लाख २१ हजार आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ रू. ६९ रहेको छ भने प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ८२ दशमलव ६६ रहेको छ ।
सन नेपालको साधारणसभा
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा फागुन ४ गते हुने भएको छ । कम्पनीको प्रथम साधारणसभाले आइपिओ जारी गर्ने प्रस्तावमा गरेको छ । कम्पनीको सो सभा होटल साँग्रीला, लाजिम्पाटमा विहान ११ बजे हुनेछ । उक्त सभाले लेखा परिक्षक नियुक्त गरि सो को पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।